Fryers Saliida Bilaashka ah ee ugu Fiican ▷ Fikradda Airfryer iyo Qiimaha
Philips Airfryer Saliid Fryers bilaash ah
Ma jeclaan lahayd inaad gurigaaga u soo iibiso hawo-shiileeyaha ugu fiican ee Philips, laakiin ma hubtid midka aad dooranayso? Ha werwerin, halkan waxaanu kaa caawinaynaa inaad doorato qaabka ku fiican in aad buuxiso baahiyaha gurigaaga.
Ha moogaanin: Fryers Saliid La'aanta Ugu Fiican
Tani waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan gudaha Air Fryers aduunka oo dhan, wuxuuna leeyahay buug-yaraha balaadhan oo wata moodallo nooc kasta ah oo qoysaska ah. Waxaan leenahay marka la barbar dhigo oo la falanqeeyo qalabkooda ugu iibinta badan si ay kuugu fududaato inaad hesho Airfryer-ka ugu fiican.
Isbarbardhigga Fryer Saliidda Bilaashka ah ee Philips
➤ Dooro Fryer-ka ugu Fiican ee Philips
Tignoolajiyada ayaa laga helay shiilan saliid la'aan ah Philips Airfryer
➤ Maxay tahay sababta aad u soo iibsato Philips Airfryer?
Sida loo nadiifiyo Philips Airfryer gudaha iyo dibadda
Dib u eegisyada shiilanyada kale ee aan saliidda lahayn ee Philips
Fikradayda ku saabsan shiilan saliid la'aanta ah ee Philips
Miiskeena waad awoodaa si degdeg ah u barbar dhig farqiga u dhexeeya Fryers caafimadka leh ee ugu iibinta badan Philips. The tilmaamaha ugu muhiimsan in aad ku xisaabtanto marka aad dooranayso mid ka mid ah qalabkan yar yar. .
Haddii aadan hubin waxa ay tahay inaad raadiso, booqo hagahayaga sida loo doorto shiilan aan saliid lahayn ku yaal bogga ugu weyn ee shabakadda.
Hawada degdega ah
Helitaanka halkan si ay dib u eegis model kasta oo leh macluumaad faahfaahsan, dib u eegista user yaa isku dayay iyo qiimaha online ugu fiican inaad heli karto. Sii wad akhriska
▷ Fryer Saliida Philips oo ka jaban
Inkastoo aysan ahayn nooca ugu jaban ee aad ka iibsan karto moodalkan in ka badan boqol euro. Waxaad qaadataa a moodel leh tignoolajiyada degdega ah ee hawada iyo 800 garaam oo awood ah qiimo la mid ah noocyada kale ee caanka ah
Tignoolajiyada hawada degdega ah ee gaarka ah ee Philips ayaa kuu ogolaanaysa inaad hawo shiileyso cuntooyinka dibadda qallafsan oo gudaha ah
Naqshad gaar ah oo loogu talagalay natiijooyin macaan, dufan yar
Gacanta lagu hagaajin karo wakhtiga iyo xakamaynta heerkulka
Way fududahay in la nadiifiyo oo waxay soo saartaa ur ka yar shiilanyada qoto dheer ee caadiga ah
Shiilan hawo kulul waxaad ku shiili kartaa, dubay, dubay oo xitaa dubi kartaa
Hal-abuurka lagu daro qalabka guriga ayaa had iyo jeer u tarjuma horumar tayo leh. Xaaladdan oo kale, marka aan ka hadalno Farsamada Twin TurboStar, waxaan ka hadlaynaa ikhtiyaarka ka saaraya baruurta cuntada, in ka badan. Maaddaama sidaan ognahay saliid uma baahnno oo haddii aan ku darno waxay noqon doontaa qadarka ugu yar. Sababtoo ah cuntadu waxay ku karsanaysaa casiirkeeda, dabcan, waxay aad ugu caafimaad badan tahay jirkeena.
Cuntadu waxay la kulmi doontaa kulayl joogto ah oo had iyo jeer isku mid ah kaas oo ku wareegaya shiilan. Tani waxay sidoo kale ka dhigaysaa inay si sax ah u kariyaan iyaga oo aan u baahnayn in loo rogo sida ay ku sameeyaan habab kale oo badan oo cunto karin ah. Natiijadu waa saxan qallafsan, oo caafimaad leh oo lagu sameeyay waqti yar iyada oo ay ugu wacan tahay qaybinta kulaylka ee aan soo sheegnay.
Sidoo kale Farsamada hawada degdega ah waxay saaxiib fiican u tahay kuwii hore iyo kuwa shiilan ee bilaa saliidda ah sida caadiga ah. Sababtoo ah waxay dammaanad qaadaysaa in natiijada cuntadu ay tahay midda ugu habboon: Crunchy dibadda laakiin aad u jilicsan oo casiir leh gudaha. Mar labaad, waa in aan sheegnaa in waxaas oo dhan ay la xiriiraan hawada, taas oo ku wareegaysa gudaha gudaha iyo si degdeg ah, taas oo dhalinaysa dhamaystirka isku midka ah ee aan raadineyno saxan kasta.
Sida magaceedu muujinayo, shiilan saliid la'aan ah Philips Waxay karin doontaa dhammaan suxuunta aad jeceshahay iyada oo aan lagu darin, in kasta oo aad ku dari karto qaado kaliya oo saliid ah haddii aad sidaas u tixgeliso. Xitaa haddii aysan lagama maarmaan ahayn, waxaad heli doontaa natiijooyin qallafsan iyo suxuun caafimaad leh hababka cunto karinta ee kala duwan sida kuwan soo socda.
Marka aan ka fikirno shiilan cuntada, waxaan ognahay in aan u baahan doono xaddi badan oo saliid ah, sida caadiga ah. Laakin shiilahan lagama maarmaan ma noqon doonto. Waxaad samayn kartaa shiilan faransiis ah, croquettes ama dhammaan cuntooyinka dhaqameed laakiin leh 80% dufan yar, taas oo u tarjumeysa natiijo caafimaad leh oo jidhkeena ah. Laakiin haa, iyada oo aan lumin muuqaalkeeda ama dhadhanka ay sidaan suxuunta noocaan ah.
Mid kale oo ka mid ah wanaagga uu leeyahay qalabkan oo kale waa inuu awood u yeesho inuu ku dubo cuntada, laakiin had iyo jeer qaab caafimaad leh iyo sida dabiiciga ah ee suurtogalka ah. Maxaa naga dhigaya inaan helno dhammaan dhadhanka oo aan ku raaxaysanno saxanka si laba jibbaar ah oo aan dembi lahayn. Dhammaadka la dubay waxaa laga heli karaa hilibka. Dhammaan noocyada hilibka waxay noqon doonaan kuwo ku habboon in la helo taasi waxay keentaa in dib-u-burburin xagga dibadda ah laakiin ay jilicsan tahay gudaha sida ay ku dhacdo feeraha ama, leh isteek fudud iyo xitaa hamburgers. Laakiin ma aha oo kaliya taas laakiin dhab ahaantii waxaad sidoo kale samayn kartaa duubo iyo dabcan, in ay gebi ahaanba qallafsan yihiin sida rootiga.
Fryer-ka Philips wuxuu kaloo leeyahay shaqada foornada, sida heshiiska korantada waan ognahay. Maadaama ay isticmaasho heerkul sare oo ay keento hawadu in ay si joogto ah u socoto. Dhab ahaantii, way fiicantahay in aad naftaada u ogolaato in lagu qaado cuntooyinka keega ee ugu fiican. Taasi waa, waxaad ku raaxaysan kartaa dhammaan noocyada macmacaanka dhowr daqiiqo gudahood: Haddii aad jeceshahay asalka koobabka, ama nooca caadiga ah, laakiin had iyo jeer tufaax guuleysta, ka dibna shiilan qoto dheer ayaa ku caawin doona.
Waxaan jecelnahay hilibka si sax ah, laakiin had iyo jeer casiir leh si ay qaniinyo kastaaba xitaa uga dhadhansato kan dambe. Hagaag, tani waa waxa aad sidoo kale ku heli doonto fryer hawada Philips. Tan iyo markii ay noqon doonto hilibka, laakiin iyada oo aan iloobin kalluunka, kuwaas oo ku karin kartaa casiirka iyaga u gaar ah. Sidan oo keliya ayaan ku raaxaysan karnaa laba jeer. Labada keli iyo tan, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso heerkulka iyo wakhtiga karinta. Hadda waxaad dooran kartaa nooca hilibka aad jeceshahay, labadaba hilibka doofaarka iyo digaaga, turkiga ama bakaylaha ayaa aasaas u noqon doona qalabkan oo kale.
Waxaan horay u soo sheegnay Faa'iidooyinka Fryers hawada kulul iyo in dhammaantood ay si ficil ah u shaqeeyaan, laakiin Maxaad u iibsanaysaa mid ka mid ah summada philips?
Inkasta oo qiimaha Philips uu ka sarreeyo noocyo badan oo suuqa ah, Fryers-keeda ayaa ka mid ah kuwa ugu qiimaha badan waxaana ku jira buug-yaraha ugu badan ee lagu iibiyo dalkeena, taas oo muujinaysa kalsoonida isticmaalayaasha shirkadda.
Haddii aad raadinayso Fryer Saliid la'aan ah laga bilaabo calaamad leh khibrad, tayada la xaqiijiyay iyo guud ahaan fikradaha wanaagsan ee iibsadayaasheeda, shirkadda Jarmalka waxaad hubin doontaa.
✔ Waa astaanta ugu iibinta badan
Isticmaalayaasha badankoodu waxay ku faraxsan yihiin Fryers-kooda Deep
✔ Way badbaadsan yihiin weelka dhaqda
✔ Waxa uu leeyahay tignoolajiyada u gaarka ah: Rapid Air iyo TurboStar
✔ Waa sumad la aqoonsan yahay oo leh dammaanad 2 sano ah
Kuwani waa shakiyada caadiga ah ee isticmaalayaasha, Haddii aad hayso wax dheeraad ah, ha ka waaban inaad na weydiiso faallooyinka 🙂
Waa maxay Airfryer?
Fryer-ka hawada macneheedu waa Hawo Fryer kulul iyo philips waxay isu geeyeen labada kelmadood si ay u isticmaalaan ereyga ka soo baxay si ay u aqoonsadaan noocyada shiilan ee aan saliidda lahayn.
Waxaad ka heli kartaa astaantan dukaamo kala duwan oo jireed (El Corte Ingles, Mediamarkt, iwm ...) ama ka iibso internetka, taas oo aan kugula talineyno inaad ku sameyso Amazon Spain.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida ay u shaqeyso iyo faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka, guji xiriirkan: Hawlgalka Fryer Air
✓ Ma inaad walaaqdaa cuntada?
Sida ku cad calaamadda, ma aha lagama maarmaan in ay uga mahadceliyaan tignoolajiyada wareegga hawada
Suxuun noocee ah ayaad karin kartaa?
Shiilan Faransiiska iyo baalasha digaaga ma aha cuntooyinka kaliya ee aad samayn karto, waxaad diyaarin kartaa kalluunka, hilibka doofaarka, khudaarta iyo xitaa macmacaanka.
En xidhiidhkan waxaad haysaa habraacyada buugaaga pdf
Marka hore, waa in aan hubinno in shiilanuhu had iyo jeer uu furmo oo qabow yahay. Markaa haddii aad hadda uun karisay, waxa fiican inaad sugto muddo.
Markay gebi ahaanba qabow tahay, waa markii dambiisha laga saari lahaa. Tan iyo shabagga gudaha labadaba, si raaxo leh ayaa loogu dhaqi karaa makiinada weelka dhaqda, haddii aad doorbideyso.
Waxaan u maroojineynaa shiilan wax yar, si aan u nadiifinno gudaha gudaha. Xaaladdan oo kale, tweli waxaad u baahan tahay oo kaliya maro ama isbuunyo, taas oo jilicsan, oo si fiican loogu shubay biyo kulul. Waxaan dhex mari doonaa gudaha oo dhan.
Haddii qaybo cunto ah ay ku dheggan yihiin oo aanay la soo bixin marada ama isbuunyada, markaa waxaad isticmaali kartaa burush laakiin ilaa inta ay leedahay bristles jilicsan. Haddii kale, waxaan dhaawici karnaa lakabka gudaha ee qalabka.
Waa in aan si fiican u engegno ama u ogolaanaa in ay hawo engegto ka hor inta aan dib loo gelin.
Markay engegaan, haddii hadhaagii qaar wali nagu dheggan yihiin, waanu shidi karnaa oo kuleylku ha ka qaado cuntada.
Si la mid ah, dibadda waa inaan sidoo kale ku tirtirnaa maro qoyan oo jilicsan. Waxaan samayn doonaa mar kasta oo aan isticmaalno, sidaas darteed ka hortagga wasakhda inay engegaan, haddii ay jiraan.
▷ Waxyaabaha lagu daro ee Philips Air Fryer Hot Air Fryers
Soo hel qalabka aad u baahan tahay si aad sida ugu badan uga faa'iidaysato shiilankaaga qoto dheer:
Philips HD9925 / 00 saxan ...
Diyaaradda Philips Airfryer HD9220/20
Tan iyo markii ay soo baxeen fikradaha iyo wararka ku saabsan shiilanyada aan saliidda lahayn, waxay ahayd in la isku dayo. Shaki la'aan, aniga ayaa doortay Fryer-ka saliidda lahayn ee Philips sababtoo ah waa mid ka mid ah noocyada caadiga ah, kuwaas oo had iyo jeer nala socday nolosheenna oo dhan. Laakiin ma aha oo kaliya taas, laakiin sababtoo ah iyada oo ay ugu wacan tahay tignoolajiyada ay ku darayso waxay naga caawineysaa, iyo wax badan, si aan u caafimaad qabno.
Yaa aan jeclayn saxan wanaagsan oo shiilan ama shiilan Faransiis ah? Dabcan, mar walba nafteena ma qancinno sababtoo ah waxaan ognahay inay ku jiraan saliid badan waxayna bedeli doonaan cunto dheellitiran. Sidaa darteed, awoodda sKu sii wad inaad ku raaxaysato dhadhanka ugu fiican, dhadhanka jilicsan oo cun wax kasta oo aad rabto laakiin leh dufan yar, had iyo jeer waa mid ka mid ah faa'iidooyinka in lagu xisaabtamo.
Mid kale oo ka mid ah kuwa ugu soo jiidashada badan waa taas waa shiilan is haysta. Maxaa ka dhigaya mid la taaban karo, in aan dul dhigi karno dusha sare ama miisaska aan gacanta ku hayno, xitaa haddii jikadayadu yar tahay. Taas, waxa lagu darayaa in ay dhakhso u noqon doonto nadiifinta iyo in aanu waqti yar ku qaadan doono, cunto karinta iyo nadiifintaba. Naqshad qumman, oo la yaqaan, awood degdeg ah oo ay ka buuxaan tignoolajiyad cusub. Maxaa kale oo aan ku weydiin karnaa? App-ka nagu wargeliya cuntooyinka cusub iyo kuwa cajiibka ah ee koowaad, labaad ama macmacaanka? Hagaag, sidoo kale waad haysataa iyada!
(Codadka: 10 Celcelis: 4.6)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Philips Air Fryer